လွပ်လပ်စွာအရေးဆိုခွင့်လေးရှိရင်ဖြင့် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » My Dear Diary » လွပ်လပ်စွာအရေးဆိုခွင့်လေးရှိရင်ဖြင့်
Posted by ကပၸိယ သာဂိ on Jul 4, 2012 in My Dear Diary |9comments
သချီးမင်းနှင့်တကွရပ်မိရပ်ဖရွာသားအပေါင်းတို့ခမျ။ ငသာဂိဟာဆိုရင်ဖြင့်ရွာထဲကိုအလွန်စာရေးပေးချင်သူဖြစ်ပါတယ်။ သို ့သော်ညားလည်းကိုပိုင်နပ်ဝပ်မရှိခြင်း၊ အလုပ်ချိန်ကြောင့်သုံးစွဲချိန်နည်းနေခြင်း ၊မြန်မာစာရိုက်မကျွမ်းကျင်ခြင်း(အင်္ဂလိပ်လိုလည်းမပိုင်ပါ) စသည်စသည်တိုကြောင့်အခက်အခဲများစွာရှိနေပါတယ် ။ဖြစ်နိုင်ရင်micro-wordနဲ့ရိုက်လာပြီး ဒီမှာပြန်တင်လို့ရရင်ကောင်းသားပေါ့ဗျာ။ အခုဒီစာကြောင်းလေးတွေတောင်ရိုက်ရိုက်ပြီး သိမ်းထားရတာ၂ရက်လောက်ကြာမယ်ထင်တယ်ဗျ၊ နောက်ပြီးကိုယ်ရေးပြီးသားတွေ ကိုယ်ပဲပြန်ကြည့်ချင်ရင်ဘယ်လိုကြည့်ရလဲဗျ။
လုချီးမင်းများခည Laptopဖြင့်wireless networkသုံးနည်းလေးများသိရင်လည်းမျှဝေပေးစေချင်ပါတယ်။ ဘဇာ့ကြောင့်လည်းဆိုတော့ ဂိဂိရဲ့ဘေးအခန်းမှာ ကိုယ်ပိုင်နပ်ဝပ်ချိတ်ထားတဲ့သူရှိတယ်ဗျ။ ဂိဂိရဲ့ကွန်ပျူတာမှာ အစိမ်းတုံးလေးတွေအပြည့်ပေါ်တယ်ဗျ။ ဘာတွေလိုအပ်တယ် ကိုယ့်ကြောင့်သူ့ကို ဘာတွေထိခိုက်သွားတတ်သလဲဗျ၊ သများကိုမထိခိုက်ပဲသုံးလိုရရင်သုံးကြည့်ချင်ပါတယ်ခည။
ကျွမ်ကျင်မှုကိုမူတည်ပြီးရွာအတွက် အလုပ်လုပ်ပေးချင်သည့် ဘာရာနကာအာပလာသာဂိ…. အဟိ….
သာဂိ ကပၸိယ has written3post in this Website..
View all posts by ကပၸိယ သာဂိ →
ကပ္ပိယ သာဂိ says:
သောက်ကျိုးတကာနည်းဘဇာ့ကြောင့်co-paste ဖြစ်နေတာလည်း။ ဒီစာကိုတင်မှအရင်စာကကွန်မန့်တွေကိုယ်ဖတ်လိုက်ရတာပါ။ အခုတော့အချိန်စေ့သွားပြီမို့အရှည်မပြောနိုင်တော့ပါ။ လူသစ်တစ်ဦးသာဖစ်ပါသည်။ အလာမကောင်းသူဖြစ်နေပါက အားလုံးကိုတောင်းပန်ပါသည်။
သူကြီးမင်း ကို သချီးလို့ပြောတာ ခံသာပေမယ့်
လူကြီးလူကောင်း ကျုပ်ကို လုချီးဆိုပြီးသုံနှုံးတာကိုတော့
ကွန်ပျူတာမှာ အစိမ်းတုံးလေးတွေအပြည့်ပေါ်တိုင်း အင်တာနက်တက်လို့ရတယ်တော့မဟုတ်..
တချို့က.. Keyနဲ့ပိတ်ထားတာမို့.. ပိုင်ရှင်က.. ခွင့်ပေးမှ တက်လို့ရတာပါ..
အဲလိုမဟုတ်ပဲ.. ဘာမှမလုပ်ပဲ.. အင်တာနက်..ဒါရိုက်တက်လို့ရနေရင်ဖြင့်..
.. ဖြစ်နိုင်ရင်.. ဘေးအခန်းသွားမိတ်ဆက်စကားလေးပြော.. ခွင့်တောင်းပေါ့..
သူကမသိပဲ.. ပွင့်နေတာဆိုရင်.. အခန့်သင့်နေရင်.. သူ့ကွန်ပျူတာထဲ..ကိုယ်ကဝင်လို့ရသွားနိုင်တာမို့.. သူ့ဖိုင်တွေမြင်နေရပြီး.. သူ့ခမျာ.. ဒုက္ခရောက်နိုင်လို့ပါ..။
ယူအက်စ်မှာဆိုရင်တော့.. ခွင့်မပေးပဲသုံးရင်… အပြစ်ရှိပါတယ်..။
စိန်ဗိုက်ဗိုက်နဲ့တောက်တဲ့တို ့လာရင်ရှင်းပြလိမ် ့မယ်
မြို့ထဲမှာများ လက်တော့ပ်ဖွင့်လိုက်လျှင် … ဘယ်အချိန်ပဲဖြစ်ဖြစ် လိုင်းတွေအများကြီးမိနေတယ် ….. အတုံးကလည်း အပြည့်တက်ပြီး ၊ လိုင်းတွေများတော့ တစ်ခုတစ်လေများ သူ့တို့ဟာ ကပ်သုံးလို့ ရနိုင်ကောင်းပါရဲ့ ဆိုပြီး ကြိုးစားကြည့်တာ … အားလုံး key ထည့်ပြီး ပိတ်ထားကြတယ် လူဇိုးဒွေ …. မြင်သာမြင်မကြင်ရတော့လည်း ……… တမိနစ်လေးကျပ်ပေးပြီးဖုန်းကြိုးနဲ့ကောက်ချိတ်လိုက်ရတော့တယ် …. ။
မမအိတုံက ဂျီမဟုတ်လို ့(၄)ကျပ်ပေါ့။ဈေးများတယ်။
ဟီးးးးးးးတချို ့များ လိုင်းတွေကို portal ခံထားသေး၏။
ဟုတ်ပါတယ် ညီလေး သန်းထွဋ်ဦးရေ သူကတော့ CDMAဆိုတော့ လေးကျပ်ပေးရပါတယ် ။
လိုင်းကတော့ ဒိုင်းဒိုင်းပြေးနေတာပဲလေ ။ အစ်ကို့ဖုန်းဆို တမိနစ်၂ကျပ်ပေမယ့် သိပ်သုံးလို့ မမြန်ဘူး ။
HTC g11 ဖုန်းနဲ့ အင်တာနက် ကို gsn လိုင်းနဲ့ သုံးပုံ လေးများ သိရင် မျှ ဝေ ပေးကြပါဦး လိုင်းမဝင်တတ်လို့ပါ